Waxyaabaha: Aluminium, Ciid -baabi'in + Anodizing
Qalabka: CNC Lathe iyo mashiinada wax qodista
Shahaadada: ISO9001 iyo ROHS u hoggaansan
Magaca summada: XUAYI
Daaweynta dusha: Sandblasting + Anodizing
Midabka: Pink, Buluug, Purple, Madow, Casaan
Shayga: 2.5 x 2.5 x 1.8 inji
Isticmaalka: Wixii tabacco ah, haramaha shiidi
Waxaan horumarin dheeraad ah ku sameynay badeecadda taasoo ka dhigaysa Furimahayaga mid ka sii wanaagsan sidii hore!
1. Badeecadeenu waxay leedahay ilko aad u fiiqan oo aad u fiiqan oo si fiican ugu taagan inay shiidaan nooc kasta oo geedo ah, laga bilaabo geedka ugu fudud ilaa midka ugu cufan oo leh dhowr marood oo fudud.
2. Shaashadeena cusub ee mesh la saari karo ayaa ka qoto dheer oo si fiican ugu habboon qaybta hoose. Waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu hayo waxyaabo badan oo dhulka ah oo aad u xasilloon. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad mar kale shiiddo geedo badan isla markaana kaa hor istaagto inaad daadato markaad furto qaybta sare.
3. Qalinjebiyahayaga 2.5 "waa mishiinka si fiican loo dhisay oo laga sameeyay daawaha aluminium ee culus. Maaddada tayada sare leh ayaa ka dhigaysa qolalka inay si habsami leh oo fudud u furmaan, ilkaha had iyo jeer waxay ahaan doonaan kuwo fiiqan oo way fududahay in la nadiifiyo.
1. Waxay ku habboon tahay shiididda iyo jebinta shaybaarka unugyada dhirta ee kala duwan, oo ay ku jiraan xididdada, afkoda, caleemaha, ubaxa, miraha, miraha, iwm;
2. Waxay ku habboon tahay shiidi iyo burburinta falanqaynta iyo ogaanshaha cuntada iyo maaddooyinka dawooyinka;
3. Waxay ku habboon tahay burburin ganaax ah iyo shiiditaan wanaagsan oo ah shaybaarro adag, dhexdhexaad-adag iyo jajab leh, sidoo kale waxay ku habboon yihiin qalabka jilicsan, laastikada iyo xargaha. Agabyada la burburin karo oo la burburin karo waxaa ka mid ah unugyo fiiqan, kiimikooyin, daawooyin, carro, wasakh, nudaha dhirta, badarka, saliidda, balaastikada, qashinka, dhogorta, dharka iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxyaabaha Aluminium, Ciid -baabi'in + Anodizing
Qalabka CNC Lathe iyo mashiinada wax qodista
Shahaadada ISO9001 iyo ROHS u hoggaansan
Magaca summada XUAYI
Daaweynta dusha Sandblasting + Anodizing
Midab Pink, Buluug, Purple, Madow, Casaan
Shayga 2.5 x 2.5 x 1.8 inji
Isticmaalka Wixii tabacco ah, haramaha shiidi
Waa Maxay Booqday
Furimaha shiidiyuhu waa aalad loo adeegsan karo in lagu jajabiyo gogosha caleemaha xashiishka jajabyo loo isticmaali karo kala -goysyada. Griinleydu waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, min yar iyo fudud ilaa aalado leh saddex ama afar 'shaandheeyaal' si loo helo Skuff.
Qalabku wuxuu ka kooban yahay qaybo isku habboon si ay u sameeyaan qayb wareegsan oo xiran. Dusha sare caadi ahaan way ka yar tahay hoosta. Qolkaas waxaa ku yaal musmaarro labada dhinac ah. Musmaarradan waa la yaabay si aysan isu taaban marka qeybaha loo rogay jihooyin ka soo horjeeda.
Xiga: Furimaha caadada caadadii